Startup – Startup95
2017-10-15 English, Funding, Myanmar, Research, Startup, Tech Comments Off on A New Point of Reference for Investment Game in Mekong Region
Building Markets,anon-profit helping local small and medium-sized enterprises (SMEs), have launchedanew open-source database on startup investment deals done by both angel and venture funds throughout Mekong region. It is accessible through Mekong Angels site http://www.mekongangels.info/. The databases is compiled fromavariety of sources: published funding …
2017-05-26 Business, English, Myanmar, Startup Comments Off on Founders or A-TEAM
What it takes to driveasuccessful startup? When we think of venture business by young entrepreneurs, we explain of the ambitious and encouraging characters of the individuals that create the new startup. In fact, we can’t deny that the roles and skills of founders are as important and success …
2017-05-26 English, Funding, Incubation, Myanmar, Startup, Tech Comments Off on Walk of Myanmar Startups
Just another Startup? Simple not complicated. This is not the basis ofabusiness model, it’s the basis of the people who are being invested to make things different. New government new system, an exciting time for startups to pull their lean canvas off more aggressively and grow quick. The …
2017-05-25 Business, English, Myanmar, Startup, Tech Comments Off on Startup Waters 101
“What could investment have been really meant for the startups before it was cool in Myanmar?” Four years ago. Facebook to me was English with less Burmese contents, and information sending locals abroad scrumming for updates about what’s happening back home. Tech community presumed imaginary as nothing much really happened …
2017-04-20 Essays, Funding, Incubation, Startup, Zawgyi Comments Off on တည်ထောင်သူတွေက ကုမ္ပဏီကို ထိန်းချုပ်ထားခွင့်ရှိလား
ကျွန်တော်တို့ ငွေကြေးမတည်ပေးခဲ့တဲ့တစ်ယောက်က VCs (စွန့်ဦး ငွေကြေးရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ) တွေနဲ့ ဆွေးနွေးနေပါတယ်။ သူက ကျွန်တော့်ကို မေးပါတယ်။ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းတည်ထောင်သူတွေဟာ Series A-round ပြီးရင် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ထိန်းချုပ်ထားတာဟာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိလားလို့ မေးတာပါ။ ဒါမျိုးဖြစ်တာ ဘယ်တော့မှ မရှိသလောက်ပဲလို့ VCs တွေက ပြောနေတယ်လို့ သူက ပြောပါတယ်။ ဒီလို မရှိဘူးဆိုတာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လောက်ကဆိုရင်တော့ အမှန်ပါပဲ။ အရင်တုန်းကဆို Series A ပြီးရင် ဘုတ်အဖွဲ့ကို ထိန်းချုပ်ထားတယ်ဆိုတာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်။ ပုံမှန်ဘုတ်အဖွဲ့မှာဆိုရင် တည်ထောင်သူနှစ်ယောက်၊ VCs နှစ်ယောက်၊ လွပ်လပ်တဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မကြာသေးခင်ကတော့ တည်ထောင်သူ တစ်ယောက်၊ …
2017-04-20 Business, Essays, Funding, Incubation, Myanmar-Unicode, Startup, Tech Comments Off on တညျထောငျသူတှကေ ကုမ်ပဏီကို ထိနျးခြုပျထားခှငျ့ရှိလား
ကြှနျတျောတို့ ငှကွေေးမတညျပေးခဲ့တဲ့တဈယောကျက VCs (စှနျ့ဦး ငှကွေေးရငျးနှီးမွှပျနှံသူ) တှနေဲ့ ဆှေးနှေးနပေါတယျ။ သူက ကြှနျတေျာ့ကို မေးပါတယျ။ စှနျ့ဦးလုပျငနျးတညျထောငျသူတှဟော Series A-round ပွီးရငျ ဘုတျအဖှဲ့ကို ထိနျးခြုပျထားတာဟာ ဖွဈလဖွေ့ဈထရှိလားလို့ မေးတာပါ။ ဒါမြိုးဖွဈတာ ဘယျတော့မှ မရှိသလောကျပဲလို့ VCs တှကေ ပွောနတေယျလို့ သူက ပွောပါတယျ။ ဒီလို မရှိဘူးဆိုတာ လှနျခဲ့တဲ့ ၁၀ နှဈလောကျကဆိုရငျတော့ အမှနျပါပဲ။ အရငျတုနျးကဆို Series A ပွီးရငျ ဘုတျအဖှဲ့ကို ထိနျးခြုပျထားတယျဆိုတာ မရှိသလောကျ ရှားပါတယျ။ ပုံမှနျဘုတျအဖှဲ့မှာဆိုရငျ တညျထောငျသူနှဈယောကျ၊ VCs နှဈယောကျ၊ လှပျလပျတဲ့ အဖှဲ့ဝငျတဈယောကျ ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ မကွာသေးခငျကတော့ တညျထောငျသူ တဈယောကျ၊ …
2017-03-23 Essays, Startup, Zawgyi Comments Off on တည်ထောင်သူတွေမှာ ရှိရမယ့် အရည်အချင်း (၅)ရပ်
ကမ္ဘာကျော် Fobes မဂ္ဂဇင်းက ပေါ်ဂရေဟန်ကိုရင်းနှီးမြှုတ်နှံသူတစ်ယောက်အနေနဲ့ စွန်ဦးထူထောင်သူတွေမှာ ဘာတွေကိုရှာကြည့် သလဲဆိုတာကို ရေးဖို့တောင်းဆိုလို့ ရေးထားတဲ့ စာပါ။ ၁- စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ခြင်း(Determination) စွန့်ဦးလုပ်ငန်းတစ်ခုကို တည်ထောင်မယ့်သူတွေမှာ ရှိရမယ့် အရေးအကြီးဆုံး အရည်အသွေးပါ။ ညဏ်ရည် ထက်မြက်ဖို့ ကအရေးအကြီးဆုံးလို့ အရင်ကယူဆခဲ့ကြပါတယ်။ တည်ထောင်သူတွေက ခပ်တုံးတုံး ဖြစ်လို့မရတာတော့ သေချာပါတယ်။ ညဏ်အရည်အသွေးတော်ယုံတန်ယုံထက်ကျော်သွားပြီးရင် ပိုပြီးအရေးကြီးက စိတ်ဓာတ်မာကျောကြံ့ခိုင်ဖို့ပါ။ အခက်အခဲ အတားအဆီးတွေကိုအမြဲတွေ့ကြုံရမှာဖြစ်တာကြောင့် လွယ်လွယ်နဲ့ ပျော့ညံ့တဲ့လူမျိုး ဖြစ်သွား လို့မရ ပါဘူး။ အမေရိကန်နိုင်ငံက အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစနစ် WePay ရဲ့ တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ ဘေလ်ကလယ်ရစ်ကို (Bill Clerico) နဲ့ ရစ်ခ်ျအဘာမန်း(Rich Aberman)တို့ကို ဥပမာပေးချင်ပါတယ်။ WePay ဟာ အောင်မြင်တဲ့ …